အမေးအဖြေများ -, Ltd. Jinghui ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Air ကို Cooler
အိတ်ဆောင် Air ကို Cooler
base Station ကိုအအေးခံခြင်း
စျေးကွက် Mode ကို
အငွေ့လေထုအေး purchasing အကြောင်းကိုသိကောင်းစရာများ:
1, အသွင်အပြင် Check:
2, လုပ်ငန်းစဉ်စီးဆင်းမှု Check:
သင်ထုတ်ကုန် purchasing အခါ, သငျသညျသေချာသောအရပ်တို့ကိုမပေါင်းစပ်စေသင့်ကြောင်း screw နှစ်ခု, အတွန်းခလုတ်များနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုကောင်းစွာ installed နှင့်တင်းကျပ်စွာချိတ်ဆက်နေကြသည်။
3, အစိတ်အပိုင်းများ Check:
မြေတပြင်လုံးအစုံအမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများအားဖြင့်စုဝေးနေသည်။ သူတို့အစိတျအပိုငျး၏အရည်အသွေးတိုက်ရိုက်အေးရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဘဝနှင့်အအေးအကျိုးသက်ရောက်မှုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အဓိကအစိတ်အပိုင်းစစ်ဆေးအရေးအပါဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အငွေ့လေထုအေး၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းလည်းပါဝင်သည်: အဓိကထိန်းချုပ် box ကိုရေစုပ်စက်, အဆို့ရှင်တွေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်, မော်တာ, မှုတ်တံ။
အငွေ့လေကြောင်း coolers ၏ Applications ကို
1, Crow ဧရိယာတစ်ခုသို့မဟုတ်အချိန်တိုအတွင်းလျှင်မြန်စွာအအေးရန်လိုအပ်ပါသည်သောဧရိယာ
ဥပမာကျောင်း, မီးဖိုချောင်, အားကစားရုံ, စက်ရုံ, ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း, စျေးကွက်, ပြပွဲခန်းမ, ညီလာခံကအခန်း။
မြင့်မားတဲ့အပူချိန်အပူကိရိယာနှင့်အတူ 2, အဆိုပါထုတ်လုပ်မှုက်ဘ်ဆိုက်များ
တောင်ပို့ဆေးထိုး, electroplating, သတ္တုဗေဒ, ပုံနှိပ်ခြင်း, Glass ကို, စက်, အစားအစာများအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်အိမ်ထောင်စုလျှပ်စစ်စက်မှုလုပ်ငန်းများအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲဥပမာ
3, အဆိုပါအနံ့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဧရိယာ, ဖုန်မှုန့်, ညစ်ညမ်းလေထု
စသည်တို့ကိုဥပမာဟိုတယ်မီးဖိုချောင်, ဆေးရုံခန်းမ, ပလပ်စတစ်စက်မှုလုပ်ငန်း, ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း, သားရေစက်မှုလုပ်ငန်း, ရော်ဘာစက်မှုလုပ်ငန်း, ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ဆေးဆိုးစက်မှုလုပ်ငန်း, အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်, လယ်ယာ
စသည်တို့ကိုဥပမာစျေးဝယ်ကုန်တိုက်, စူပါမားကတ်, အပန်းဖြေ, ဖျော်ဖြေရေးစင်တာ, စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့အခန်း
1, အငွေ့လေထုအေး, လေဝင်လေထွက်, အအေး, humidification အသုံးပြုလေထုအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေပါသည်။ အခြားအကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, pls သည့် JH အင်ဂျင်နီယာများတိုင်ပင်ဆွေးနွေးသို့မဟုတ်ကြိုတင်ရောင်းချပါတယ်။
က) အပူပိုင်း-မီးသီးအပူချိန်: 20 ℃ -50 ℃
ခ) ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆ: ≤85%
က c) ဖိအား: 86Kpa-106Kpa
ဃ) သန့်ရှင်းသောရေကိုအသုံးပြုကြောင်းသေချာပါစေ , နှင့်၎င်း၏အပူချိန် 45 ℃ထက်လျော့နည်းဖြစ်သင့်ကြောင်းထောက်ပံ့ရေးဖိအား 0.15-1Mpa အကြောင်းကိုဖြစ်၏
င) အဆိုပါထောက်ပံ့ရေးဗို့နှုန်းဗို့အား၏ 15% ±ကျော်လွန်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး
, f) အဘယ်သူမျှမစားဓာတ်ငွေ့ဧရိယာ
3, အေး၏အပြင်ဘက်အခွံနှင့်အထုပ်လုံးဝမီးလျှံနှောင့်နှေးပစ္စည်းများပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိပါ။ မီးမဆိုအရင်းအမြစ်ကနေကာကွယ်တားဆီးဖို့သေချာပါစေ။
4, ယိုစိမ့်ရာမှထိခိုက်ပျက်စီးမှု၏အမှု၌, သေချာယိုစီးမှုအဆို့ရှင်နှင့်မှန်မှန်ကန်ကန်လေထုအေးအသုံးမပြုခင်ချိတ်ဆက်ချိတ်ဆက်ဝင်ပေါက်အဆို့ရှင်ပါစေ။
ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်ရှောင်ရှားရန် 5, မဟုတ်ပါလျှင်, သင် window ကိုဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်သဘာဝအိပ်ဇောနှင့်စက်မှုအိပ်ဇောစေရန်ဆံသည်အခြား cooing စက်တပ်ဆင်နိုင်သည်, လျှောက်လွှာသောနေရာများအတွက်လုံလောက်အောင်အိပ်ဇောအရေအတွက်ရှိရမည်, ပူးတွဲရာအရပ်သို့လေကြောင်းအအေး။
6, အေးပြုပြင်ရန်လိုအပ်နေပါသည်သောအခါ, ပါဝါထောက်ပံ့ရေးခုတ်လှဲနှင့် "ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်မျှမသုံးစွဲခြင်း" ဟုသတိပေးသည်နိမိတ်လက္ခဏာကိုသွင်းထားရန်လိုအပ်ပေသည်။
အဆိုပါအေးအစုံခရီးစဉ်အကူအညီများအတွက်ဝန်ဆောင်မှုကိုခေါ်တဲ့အခါမှာ 7,, သင်၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး switch ကိုမပြောင်းကြဘူး။
8, မကြာခဏ coolers ပေါ်နှင့်ပိတ်မပစ်ပါ ကျေးဇူးပြု.
9, စဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆရာအရပျအတှကျအတိုငျး, pls အအေး၏အထူးကု၎မှုနှုန်း၏လမ်းညွှန်အောက်မှာအသုံးပြုရန်လေထုစိုထိုင်းဆမှပြောင်းပြန်အချိုးကျသည်။
1, သန့်ရှင်းအအေး pad ပါ
ဟာအေးထံမှ pad ပါ Remove, ပြီးတော့ကိုထိပုတ်ပါရေဖြင့်ဆေးကြောသန့်စင်
2, အနံ့ Remove
သင်အသုံးပြုနေတဲ့ပြီးနောက်တင့်ကားကို clean up မထားဘူးဆိုရင်) 2, လေထုအချို့ရှိစေခြင်းငှါအအေး သင်ကအသုံးပြုတဲ့အခါလာမယ့်အချိန်အနံ့။ (သန့်ရှင်းတဲ့ function ကိုပိတ်ထားခဲ့သည်ချ Shut)
3) အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခြင်းကိုအပြီးအချိန်ပေါ်တွင်အေးသန့်ရှင်းရေးမထားပါနဲ့။ (အော်တိုသန့်ရှင်းတဲ့ function ကိုပိတ်ထားခဲ့သည်)
ယေဘုယျအားဖြင့်ကအနံ့ကိုတားဆီးဖို့ပိတ်စင်ကြယ်သော function ကိုဖွင့်ဖို့အကြံပြုသည်။
ကြိမ်ပေါ်အအေး pads clean ကိုမျှော်လင့်, သင်ကိုလည်းရေတိုင်ကီမှလိုရင်းဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ပိုးသတ်ဆေးထည့်နိုင်သည်။
ဆောင်းရာသီတွင်သို့မဟုတ်သင်တစ်ဦးအနေဖြင့်များအတွက် coolers အသုံးမပြုတဲ့အခါမှာအောက်ပါပါဘူးကျေးဇူးပြုပြီး:
ပထမဦးစွာရေအဆို့ရှင်ကိုပိတ်ဖို့နှင့်အထက်ပြထားတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံသန့်ရှင်းရေးများရန်အေး pad ပါဖယ်ရှား, တစ်ချိန်တည်းမှာ, တင့်ကားနှင့်သန့်ရှင်းသောသွန် က။ ပါမစ်ပါကတစ်ဦးဘက်ပြောင်းရှိသည်ဖို့ပိုကောင်းပါတယ်။ သန့်ရှင်းရေးပြီးနောက်, အအေး pad ပါ install နှင့်5မှ 8 မိနစ်အလုပ်လုပ်သည့်အေးဟာ pad ပါခန်းခြောက်စေနှင့်မှာနောက်ဆုံးပါဝါထောက်ပံ့ရေးပိတ်ပစ်။ ဒါဟာပြင်ပဖုန်မှုန့်ရပ်တန့်ဖို့ပါးပျဉ်းအကာအကွယ်အဖုံးမှပိုကောင်းပါလိမ့်မည်။
4 စစ်ဆင်ရေးမတိုင်မီ Check: အရေပေါ်ဘောလုံးကိုအဆို့ရှင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါသလား ထိန်းချုပ်မှုလိုင်းများမှန်ကန်စွာ fixed ပါသလား? ရေနံဝံက centrifugal အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်လျှင်။ ခဏစစ်ဆင်ရေးပြီးနောက်အအေးခံ pads စစ်ဆေးပါ။ အခြားသာမန်လုပ်ငန်းဆောင်တာစစ်ဆေးပါ။
5, အငွေ့လေထုအေးစွမ်းအင်ချွေတာသုံးစက်ကိရိယာများကိုတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာနှင့်သာအချို့သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်သင်အသုံးပြုနေတဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာပြီးနောက်အချို့သောသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အဘို့အစက်, ပိုကောင်းတဲ့အအေးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့ပြင်ပ installed က၎င်း၏ပိုကောင်းဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်။
အမှားကုဒ် လက္ခဏာအပြစ်တင် ဖြေရှင်းနည်းများ
E1 လေထုအေးဖို့ power supply Over-လက်ရှိဖြစ်ပါသည် ပါဝါပိတ်ထားကိုချိုးဖျက်လျက်, power supply စစ်ဆေးပါ
င2လေထုအေးဖို့ဗို့ထောက်ပံ့ရေး Over-ဗို့ဖြစ်ပါသည် ပါဝါပိတ်ထားကိုချိုးဖျက်လျက်, power supply စစ်ဆေးပါ
E3 လေထုအေးဖို့ဗို့ထောက်ပံ့ရေးအောက်မှာ-ဗို့ဖြစ်ပါသည် ပါဝါပိတ်ထားကိုချိုးဖျက်လျက်, power supply စစ်ဆေးပါ
E4 အဆိုပါမော်တာ overheat ဖြစ်ပါသည် ပါဝါပိတ်ထားကိုချိုးဖျက်လျက်, power supply စစ်ဆေးပါ
ဟာအအေး pads စစ်ဆေး
E8 ထိုအုတ်ရိုးနဲ့ controller လေထုအေးထံမှ signal ကိုမခံမယူနိုင်ပါတယ် ဆက်သွယ်ရေး interface ပေါ်မှာကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်မှုအာရုံစိုက်
E9 အဆိုပါရေပေးဝေရေးလုပျဆောငျခ 15mins အတွင်းကိုလက်စသတ်မရနိုငျ အဆိုပါဝင်ပေါက်အဆို့ရှင် Check
ဘုံပြဿနာများ & အကြုံဆေးတစ်လက်
ပြဿနာ: အေး pads ၏အပိုင်းစိုစွတ်သောမဟုတ်ပါ
(1) ရေဖြန့်ဖြူးပိတ်ဆို့နေသည်, အဲဒါကိုရှင်းလင်းပါ။
(2) ရေတိုင်ကီအဆင့်ကချိန်ညှိပါ slant ဖြစ်ပါတယ်။
ပြဿနာ: ပြေးညှစ်ထုတ်လိုက်ပေမယ့်ရေ circulates မဟုတ်, ဒါမှမဟုတ် pads ရေကင်းမဲ့နေသည်။
ကိုရေဖြန့်ဖြူးပိတ်ဆို့နေသည် (1), အဲဒါကိုရှင်းလင်းပါ။
(2) Pump ရေစစ်အောင်ပိတ်ဆို့
ပြဿနာ: controller ကိုအပေါ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်အဆိုပါအအေးအိုင်ကွန်
အနိမ့်သောရေ (1) သတိပေးခြင်း, ရေဝင်ပေါက်အဆို့ရှင်ပိတ်ဆို့ခြင်းသို့မဟုတ်ရေအရင်းအမြစ်ရပ်နားထောက်ပံ့ရေးရေစစ်ဆေးပါ။
ရေကိုအလုံအလောက်အခါနေဆဲမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်လျှင် (2), ရေအဆင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးစစ်ဆေးပါ။
(3) Pump ရေစစ်အောင်ပိတ်ဆို့
(1) ရေပေးဝေရေးပိုက်ကနေယိုစိမ့်: အဆိုပါပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်-ရေပိုက်ကနေအသက်သို့မဟုတ်ကျိုးပဲ့နှင့်ရေယိုဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်ကပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်-ရေပိုက်ကိုပြောင်းလဲပေးပါ။
(2) ယိုစီးမှုအဆို့ရှင်ကနေယိုစိမ့်: အကိုရေအဆင့်ကိုလည်းမြင့်မားသည်။ ရေကိုဝင်ပေါက်အဆို့ရှင်ကိုချိန်ညှိပေးပါ။
(3) ခြမ်း panel ကိုကနေယိုစိမ့်: အေး pads ပိတ်ဆို့နေကြတယ်, အဲဒါကိုရှင်းလင်းပါ။
ပြဿနာ: အဆိုပါ Controller ကိုမဖျောပွနိုငျ
(1) လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်မှုကိုစစ်ဆေးပါ။ လျှပ်စစ်အကာအကွယ် device ကိုလုပ်ဆောင်နေသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
(2) မြေကြီးတပြင်ဝါယာကြိုးမှန်ကန်စွာချိတ်ဆက်စစ်ဆေးပါ။ အဆင့်လိုင်းများညာဘက်ချိတ်ဆက်ဖြစ်ကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ဖျူးကျိုးလျှင်စစ်ဆေးပါ။
(3) တင်းကျပ်စွာချိတ်ဆက် signal ကိုလိုင်းကိုစစ်ဆေးပါ။
ပြဿနာ: 3PH အေးတစ်ဘတ်ဇ်၏မော်တာဆောင်ကြဉ်းလုပ်ကိုင်ဖို့ပျက်ကွက်။
(1) ပါဝါက power supply စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်, ထိုအဆင့်ကင်းမဲ့။
(2) မော်တာများနှင့်လျှပ်စစ် PCB ဘုတ်အဖွဲ့ဆင်းရဲသားကိုအဆက်အသွယ်သို့မဟုတ်မစစ်ဆေးပါ။
ဖြစ်နိုင်ချေအကြောင်းမရှိတွေ့ရှိခဲ့ရန်ခဲယဉ်းသည်ဆိုပါက, သင်နည်းလမ်း, နှိုင်းယှဉ်နည်းလမ်းသည် cameral နည်းလမ်းသို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းများကိုအစားထိုးလိုက်ပါကထွက်တွက်ဆနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်တို့သည်လည်းဒေသခံဖြန့်ဖြူးမမေးသို့မဟုတ်အကူအညီတောင်းရောင်းချနိုင်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီ: ဖူ Jinghui ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းပညာ Co. , Ltd မှ။
E-mail ကို: s15@jinghui-tech.com
နေရပ်လိပ်စာ: Wushan လမ်းမကြီး No.3, Gaishan မြို့, Cangshan ခရိုင်, ဖူစီးတီး, ဖူခရိုင်, တရုတ်